ကုမ္ပဏီအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC
သင်သည်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်သင့်တော်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
●ဘဏ်အကောင့်၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့
●ဘဏ်အကောင့်၊ Antigua နှင့် Barbuda တို့ဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင် Offshore Company တွင်ပါ ၀ င်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဈေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်
Antigua နှင့် Barbuda ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုကူညီသလဲ။
Antigua နှင့် Barbuda သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများသည် Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုအတွက် Clients များထံအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Antigua နှင့် Barbuda မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ဒေသများနှင့် Free Zone ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အတွက် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်အမျှ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda လိုအပ်သောကုမ္ပဏီများသည် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
သင်၏ Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက် CRM Solutions တို့နှင့်အတူ Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အပြည့်အဝဖြေရှင်းပေးမည်။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက် virtual office၊ Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 109 အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အခြားများစွာတို့ဖြစ်သည်။
သင်၏ Antigua နှင့် Barbuda အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအမည်ယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Antigua နှင့် Barbuda အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကျွန်းများသည်ကာရစ်ဘီယံအရှေ့ဘက်ရှိအငယ်စားအန္တာရယ်တွင် Leeward Islands ကွင်းဆက်၏တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားသည်။ အန္တိဂွာကမ်းရိုးတန်းသည်မျက်နှာသွင်ပြင်အမျိုးမျိုးရှိပြီးကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကျောက်တန်းများဖြင့်သန္တာကျောက်တန်းများ၊ Parham နှင့် English Harbour အပါအ ၀ င် bays အနည်းငယ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်တင်ရန်ကုန်ကျသည်။ ကျွန်းသည် ၁၀၈ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။ အခြား Leeward ကျွန်းများသည် Antigua နှင့်တောင်တန်းများနှင့်ကျွန်းသစ်ကျွန်းများလိုအပ်သည်။ ရေလမ်းကြောင်းနှင့်နွေ ဦး ရာသီမရှိခြင်းကြောင့်နှစ်စဉ်မိုးရေချိန် ၁၀၀၀ မီလီမီတာရှိသော်လည်းမိုးခေါင်မှုပုံမှန်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဘာဘူဒါသည်သန္တာကျောက်တန်းတစ်ခုရှိပြီးအဆင့်မြင့်ပြီးစိမ်းလန်းစိုပြေသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း Lindsay Hill ရှိ ၁၄၃ ပေအထိမြင့်တက်သောနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ၆၂ စတုရန်းမိုင်ရှိသည်။
Antigua နေထိုင်သူအများစုသည် St. John's တွင်နေထိုင်ကြသည်။ စီးပွားရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့် Agribusiness ကိုလှုပ်ရှားမှုစီးပွားရေးကဖြုတ်ချခဲ့သည်။ ကြံစိုက်ပျိုးမှုသည်ကာလရှည်ကြာစွာ Antigua တွင်အထွက်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်း၏တီထွင်မှုသည်ယခုအချိန်တွင်ပိုလျှံနေသည်။ ဘာဘူဒါသည်သကြားစိုက်ခင်းစနစ်နှင့်မည်သည့်အခါမျှမပတ်သက်ခဲ့ပါ၊ ၄ င်း၏နေထိုင်သူများသည်တံငါသည်များ၊ လှုပ်ရှားမှုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့်သူတို့၏မြေယာနေထိုင်ခွင့်ကိုဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရဆိုးဝါးစေသည်။ citrus သဘာဝပစ္စည်းများ၊ သရက်သီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများအပါအ ၀ င်ဖုန်၏ရလဒ်များကိုကျွန်းများပေါ်တွင် ဖန်တီး၍ ဖန်တီးသည်။ စုရုံးစီးပွားရေး၌အနည်းငယ်အစိတ်အပိုင်းကိုလက်ခံ; လှုပ်ရှားမှုအများစုတွင်ပစ္စည်းများကိုစိုက်ပျိုးခြင်း၊ အဝတ်အထည်နှင့်ပစ္စည်းများနှင့်ခိုင်ခံ့သောရင်ပြင်များပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းပါဝင်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အခွန်ထမ်းများထောက်ပံ့သောအဖွဲ့အစည်းများသည်စီးပွားရေးနှင့်လစာ၏အဓိကကျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့၏စီးပွားရေးသည်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ဂျီဒီပီ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်သို့မဟုတ်အဝိုင်းပုံသဏ္accountsာန်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ထိုနည်းတူစွာအန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောကုန်သွယ်ရေး၏အဓိက ၀ န်ထမ်းလည်းဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လဲလှယ်ရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသိသိသာသာများပြားလာ
စီးပွားရေးစတင်သောအခါသင်သိသောအရာများကိုလိုက်နာပြီးသင်၏နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ရှိနေရန် ပို၍ လုံခြုံသည်ဟုထင်ရသော်လည်းနိုင်ငံခြားတွင်မိမိကိုယ်ကိုတည်ထောင်ခြင်းသည်သင် ဦး စားပေးစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသောအရာများကိုပိုမိုအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုမှာကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံဖြစ်သည်၊ သို့သော်နှစ်ကျွန်းကျွန်းသည်သင်၏အသစ်သောရှာဖွေမှု၏နေအိမ်ဖြစ်သင့်သည့်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။
အရှေ့ကာရစ်ဘီယံတွင်အကြွယ်ဝဆုံးသောပြည်နယ်တစ်ခုအနေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာသည်လုပ်ငန်းသစ်များအားအပြီးသတ်တာဝန်ယူစေလိမ့်မည်။ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများသည်လည်းအလားအလာရှိသောလုပ်သားများဖြစ်လာနိုင်သည့် ၁၀၀% ခန့်ကျွမ်းကျင်မှုနှုန်းထားဖြင့်အောင်မြင်သော၊ ထို့အပြင်အရှေ့တိုင်းကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများအဖွဲ့ (OECS) အတွက်တိုင်းပြည်သည်အရေးကြီးသည်။ ကုန်သွယ်မှု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အရင်းအနှီးသည်ပြည်နယ်အားလုံးမှတစ်ဆင့်လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်၊ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသတ်မှတ်ထားသောနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်မီးစွဲလောင်ရန်နောက်ထပ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှာအသေးစားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအက်ဥပဒေဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အထူးအကူအညီများပေးခြင်းဖြင့်နိုင်ငံ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားပေးသည့်အနေဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဤအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဤလှုံ့ဆျောပေးသည့်အင်အားစုများသည်အဖွဲ့အစည်းမှအသုံးပြုသောမည်သည့်မြေသို့မဟုတ်အဆောက်အအုံအတွက်မဆို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်နှစ်စဉ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှဖယ်ထုတ်ထားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည်အခြားအချက်အချာကျသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများ၏ ၃၀% သည်စိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်းထိုနေရာ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းမျှကိုသာယခုအချိန်တွင်အသုံးပြုနေသည်။ ABIA သည်apရိယာသည်နာနတ်သီး၊ ကြက်၊ သမုဒ္ဒရာကျွန်းချည်များဖန်တီးခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်ကြီးထွားနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။ အိုင်စီတီသည်အခြားအလားအလာရှိသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုပေးနိုင်သည်။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါသောကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အထူးသဖြင့်ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်၍ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Antigua နှင့် Barbuda ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်နှင့် Antigua နှင့် Barbuda သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ တို့၌တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများအားအစမှအဆုံးသတ်ပေးပြီး၊ Antigua ရှိကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်ငှားရမ်းခြင်းအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပေးသည်။ နှင့်ဘာဘူဒါ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရှိသောရုံးခန်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်စီးပွားရေးဝယ်ယူမှု၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနံပါတ်များ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာဘူဒါ၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် CRM Solutions၊ ကုန်သည်စာရင်း Antigua နှင့် Barbuda သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့် Antigua and Barbuda၊ အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်အိုင်တီဖြေရှင်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင် Web development၊ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးမှု အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Antigua နှင့် Barbuda အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်အန္တိဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတို့မှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှအဆုံးမှအဆုံးသို့အဖြေရှာပေးမည်။ Antigua နှင့် Barbuda သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်သင်၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းကိုလည်းကူညီသည်။ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် virtual နံပါတ်များ၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Antigua and Barbuda၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိ CRM Solutions၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုန်သည်စာရင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တွင်အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ နှင့် Barbuda၊ Antigua ရှိ IT ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဘာဘူဒါများသည် A အတွက် web development နှင့်တူသည် ntigua နှင့် Barbuda၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများတွင်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Antigua နှင့် Barbuda အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Antigua နဲ့ Barbuda နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစတင်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေး၏အတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ
Antigua နှင့် Barbuda စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်အပိုဝန်ဆောင်မှုများဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ
Antigua နှင့် Barbuda စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ကုန်သည်စာရင်း Antigua နှင့် Barbuda / Payment Gateway Antigua နှင့် Barbuda
Antigua နှင့် Barbuda BUSINESS COMPANY အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
Antigua နှင့် Barbuda ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Antigua နှင့် Barbuda
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Antigua နှင့် Barbuda Offshore ကုမ္ပဏီများအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Antigua နှင့် Barbuda
Antigua နှင့် Barbuda ရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှုကိုပြပါ Antigua နှင့် Barbuda
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
●အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်ခကြေး (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၀
●အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီများပါဝင်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခများ - ဒေါ်လာ
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
● Antigua နှင့် Barbuda ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
● Antigua နှင့် Barbuda ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်လိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးခြင်း
● Antigua နှင့် Barbuda ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်
●ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company အတွက်သင့်အတွက်သင့်တော်သောကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပေးအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်းဝင်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်အချက်အလက်များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်နှင့်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Antigua နှင့် Barbuda သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဘဏ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကုန်သည်စာရင်း
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာဖြစ်သည်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Antigua နှင့် Barbuda ကို Millers Makers မှတစ်ဆင့်
အကယ်၍ သင်သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့ရှင်းလင်းမည်ကိုရှင်းလင်းစွာပေးလိမ့်မည်။ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Antigua နှင့် Barbuda ရှိဖောက်သည်များနှင့် Antigua နှင့် Barbuda အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်၊ သင်သည် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့်အန္တိဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဖွဲ့စည်းသောကုမ္ပဏီများအတွက်အန္တိဂွါနှင့်ဘာဘူဒါမှ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအန္တိဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက် Antigua နှင့် Barbuda အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်။ လျှောက်ထားလိုလျှင်၊ Antigua နှင့် Barbuda နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Antigua နှင့် Barbuda နေထိုင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Ant Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
Ant Antigua နှင့် Barbuda နေထိုင်ခွင့်
Ant Antigua နှင့် Barbuda အတွက်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
Ant Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ.
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှအရာများ၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အတူသင်၏ Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုမြင့်မားခြင်းကြောင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ Antigua နှင့် Barbuda တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုပေးလှူသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူးဒါများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်မပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစပြုခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီခြင်းအားဖြင့်“ စီးပွားရေးအကျယ်အ ၀ န်း” သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုတတ်နိုင်သမျှစျေးအသက်သာဆုံးပေးသည်။
WE Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရှိသော International Business Company အတွက် Certificate ကိုဝေမျှပါ။
Antigua နှင့် Barbuda / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
Antigua နှင့် Barbuda / LLC ရှိ International Business Company ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါရှိအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရှိသော International Business Company ။
Antigua နှင့် Barbuda / LLC တွင် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံရှိ International Business Company / Antigua နှင့် Barbuda ရှိ LLC
Antigua နှင့် Barbuda ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိပဲလုပ်ဆောင်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုထားပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ ထီ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဘဏ္ageာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှအာမခံလုပ်ငန်း၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အန္တိဂွာနှင့် Barbuda ရှိလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်လိုအပ်ပါက၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" အတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ပြုလုပ်သူသန်းနှင့်ချီသောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် Professional CFA တို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစာရင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့် Antigua နှင့် Barbuda ၌တည်၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများအတွက် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များကိုလည်း Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များကိုကူညီပါ။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Corporate Services | စိန့်ဂျွန်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Corporate service များအတွက် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီ၌ထည့်သွင်းရန်အတွက် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီ၌ပါဝင်ခြင်းအတွက် Antigua နှင့် Barbuda တွင် Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ၊ Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်ခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda မှစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | စိန့်ဂျွန်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
Antigua နှင့် Barbuda နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ.
Antigua နှင့် Barbuda ရှိငွေစာရင်းများ Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင် outsource လုပ်နိုင်သော Antigua နှင့် Barbuda တွင်ပါဝင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Antigua နှင့် Barbuda ၌တည်၏။
စီးပွားရေးအတွက်ရောင်းရန်ရှိသော Antigua နှင့် Barbuda
Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံ
HR အတိုင်ပင်ခံ Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်သင်၏ HR ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်သင်၏ဝန်ထမ်းများကိုဝန်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိအဆင်သင့်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Antigua နှင့် Barbuda တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ Antigua၊ Barbuda နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"Antigua နှင့် Barbuda ၌တည်၏
Antigua နှင့် Barbuda တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ.
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက် Antigua နှင့် Barbuda မှ။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Antigua နှင့် Barbuda ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် Antigua နှင့် Barbuda ရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Antigua နှင့် Barbuda အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Antigua နှင့် Barbuda ရှိစီးပွားရေး VoIP နှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Barbuda လူနေအိမ် VoIP အပါအဝင် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှဖြစ်သည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Antigua နှင့် Barbuda တွင်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါAntigua နှင့် Barbuda တွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်တီထွင်မှုနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်များထုတ်လုပ်ခြင်း Antigua နှင့် Barbuda ရှိစျေးသက်သာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့၏တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာတွင်ထည့်သွင်းရန်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်အရာနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအနက်ရိုးရှင်းစွာဖြင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံသားများနှင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင် International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများရှိ International Business Company Registration, Antigua and Barbuda တွင် International Business Company တည်ထောင်ခြင်း၊ Offshore International Business Company Formation Antigua and Barbuda၊ Offshore International Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua and Barbuda တွင် Offshore International Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအတွက်ကူညီပံ့ပိုးမှု | အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း LLC ကုမ္ပဏီကိုအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် လီဂျင်ဒါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကန့်သတ်ခြင်း IBC သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း IBC ကုမ္ပဏီသည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC တည်ထောင်ခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း LLC၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘာဒါတွင်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ LLC တို့ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အန်တီဂူနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအန်တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , Offshore LLC Antigua and Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင် Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းကိုအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua and Barbuda, Offshore Limited Responsability Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း Antigua and Barbuda, Offshore Limited Liability Company တွင် Antigua and Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda Limited Responsability Company ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda Limited Responsability Company Registration, Antigua နှင့် Barbuda Limited Liability Company ပေါင်းစည်းခြင်း၊ , အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိနေထိုင်သူများနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုလည်း Antigua နှင့် Barbuda တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင် IBC ပါဝင်မှု၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အန်တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများ၊ အိုင်စီတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန်တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းကိုလည်းအန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , ကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကုမ္ပဏီ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Antigua နှင့် Barbuda ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Limited Liability Company ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကုမ္ပဏီကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်သင်မည်သို့ကူညီနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , Antigua နှင့် Barbuda မှ Offshore ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းမှုမှာလည်း Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များဖြစ်သည်။ Saint John's တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint John's တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint John's မှ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Saint John's မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Saint မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျွန်
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည် Saint John's တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကို Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များမှလည်းကောင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်းကောင်းအောင်မြင်မှုရရှိသည်။ အောက်ပါမြို့ကြီးများ၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စိန့်ဂျွန်၏စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်ဂျွန်ရှိစိန့်ဂျွန်၏ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်၊ စိန့်ဂျွန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်၊ စိန့်ဂျွန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်
Antigua နှင့် Barbuda တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Saint John's တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သင် Antigua နှင့် Barbuda ရှိတတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့မှပေးအပ်တာကအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွေမှာဈေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီဂွာနဲ့ဘာဘူဒါမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအန္တီဂွာနဲ့ဘာဘူဒါတွေမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ Saint John's မှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဂျွန်ပြည်နယ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဂျွန်ပြည်နယ်ရှိစိန့်ဂျွန်၏ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်ဂျွန်ပြည်နယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
Antigua နှင့် Barbuda တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Saint John's တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင် ဂျွန်
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Saint John's တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်ကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြား၊ စိန့်ဂျွန်တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သူစိန့်ဂျွန်တွင်မှတ်ပုံတင်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်စိန့်ဂျွန်တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားမှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Antigua နှင့် Barbuda | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Saint John's
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးအန္တာဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျမှု Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး (Antigua နှင့် Barbuda) | စိန့်ဂျွန်ပြည်နယ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီတစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ထောင်မည်နည်းသို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်သို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ရန် Antigua နှင့် Barbuda တွင်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ထည့်သွင်းပါ Saint John's တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ International Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်သင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလား အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း LLC အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လီဂျင်ဒါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း IBC ကုမ္ပဏီသည်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အင်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံတို့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ အင်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင် LLC ကိုထည့်သွင်းပါ Incigate LLC ကုမ္ပဏီအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ | အင်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင်လီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ IBC ကို Antigua နှင့် Barbuda တွင်ထည့်သွင်းပါ အင်တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီများပါဝင်မှုနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့၏ခြားနားမှုကားအဘယ်နည်း။
အသုံးပြုသူအများစုကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။ ဘာဘူဒါ။
ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများ Antigua နှင့် Barbuda | Antigua နှင့် Barbuda ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Antigua နှင့် Barbuda ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
သင်၏အန်ဂျဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုလည်းပေးသည်။ လူသိများသောအန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Saint John's တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Antigua နဲ့ Barbuda မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
Antigua နှင့် Barbuda တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း။
ယနေ့ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်။ , Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီ၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်ဂျွန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။
အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Saint John's တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda ၏တရားဝင်ဆိုဒ်များ
Antigua နှင့် Barbuda ၏အစိုးရ
Antigua နှင့် Barbuda ၏ High Commission
Antigua နှင့် Barbuda သတင်းများ
လေဆိပ်န်ဆောင်မှုများ Antigua, Ltd. ASA
ဘာဘူဒါ Express ကို
Antigua & Barbuda - တရားဝင်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
ယနေ့ Antigua & Barbuda
ရွက်လှေ Antigua ဂန္ထဝင်
Antigua Barbuda အဏ္ဏဝါလမ်းညွှန်
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုဒ်များလမ်းညွှန် ။-Open Directory စီမံကိန်း - အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ
ဓနသဟာယ - Antigua နှင့် Barbuda
LANIC Antigua နှင့် Barbuda
Wikipedia: Antigua နှင့် Barbuda
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် - အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ
ANTIGUA နှင့် BARBUDA ရှိဘဏ်များစာရင်း
6. BOI BANK ကော်ပိုရေးရှင်း-https://www.bankofindia.co.in/
9. CBA ဘဏ်နှင့်ယုံကြည်မှု INC.- https://cbandt.com/
10 ။ : D BANK LTD.- https://dbankonline.com/
11 ။ အရှေ့ပိုင်းကာရစ်ဘီယံဘဏ်လီမိတက်။ (ECAB) - https://ecabank.com/home/
12 ။ ပထမရာဘာဘီနိုင်ငံတကာဘဏ်https://www.cibcfcib.com/
13 ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့အုပ်စု -https://globalabc.org/
14 ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုဘဏ်, LTD.- http://www.globalbank.ag/
15 ။ Meinl Bank (အန္တိဂUA) လီမိတက် -http://www.privatebanking.com/directory/central-america-antigua-barbuda-st-john-s/banks/meinl-bank-antigua-ltd
16 ။ မြောက်ပိုင်းဘဏ်လီမိတက် -http://nibank.com/nibank/
17 ။ PKB PRIVATBANK LTD- https://www.pkb.ch/
18 ။ RBTT BANK CARRIBEAN LIMITED - https://www.rbc.com/caribbean.html
19 ။ ကနေဒါတော်ဝင်ဘဏ်https://www.rbcroyalbank.com/personal.html
20 ။ Trium Bank နှင့်ယုံကြည်မှု LTD.- https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.trium_bank__trust_ltd.111e7bc8a89fc0e8b68198ae4f88f5d2.html
21 ။ VTI BANK LTD- http://www.privatebanking.com/directory/central-america-antigua-barbuda-st-john-s/banks/vti-bank-ltd
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ငြင်းဆိုခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်၊ ထုတ်လုပ်သည့်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) အငြင်းပွားဖွယ်ရာပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအားအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါသို့၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်မထောက်ပံ့ပါ။
● Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Antigua နှင့် Barbuda ဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င ်၍ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရှိသော၊ သို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒနှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်၊ ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများ။
● Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ Antigua and Barbuda သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေ၊
●အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှ စ၍ ဖြစ်စေ၊
●အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ခွင့်သို့မဟုတ်ပါ။
●အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေခံအန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါဝင်သောအန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါသို့သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ်မှသော်လည်းကောင်းတစ် ဦး ချင်းသော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်သော်လည်းကောင်းပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသော Antigua နှင့် Barbuda မှသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda သို့တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ, ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ ဘဏ်အကောင့်, ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ ယုံကြည်မှု ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဖြစ်သည်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-antigua-and-barbuda/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-antigua-and-barbuda/